Salary Negotiation – Do’s and Don’ts (Part – 2) ﻿
Salary Negotiation – Do’s and Don’ts (Part – 2)
လစာငွေညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရာတွင် ဆောင်ရန်/ ရှောင်ရန်များ (အပိုင်း - ၂)
သင့်သူငယ်ချင်း/ အသိမိတ်ဆွေတွေ လက်ရှိမှာဘယ်လောက်လစာတွေရနေသလဲဆိုတာကို မကြည့်ပါနဲ့ - လစာငွေညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်စဉ်အတွင်းတွင် သင့်သူငယ်ချင်း/ အသိမိတ်ဆွေ/ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များရနေတဲ့ လစာငွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်နေခြင်းဟာ လွန်စွာမှားယွင်းပြီး professional မဆန်ရာရောက်စေပါတယ်။ သင်ဆွေးနွေးမယ့်ကိစ္စဟာ သင့်အတွက်ပဲဖြစ်သင့်ပြီး သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုများကိုသာ သင့်လစာငွေတိုးမြှင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုရတဲ့ အကြောင်းပြချက်ခိုင်မာစေဖို့ ပြောကြားသင့်ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားတဲ့လစာရရှိနေတဲ့ သင့်သူငယ်ချင်း/ အသိမိတ်ဆွေများနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို သင့်အနေနဲ့ မနာလိုဖြစ်လိုက ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အခြားသင်မမြင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများစွာလည်းရှိနေသေးတဲ့အတွက် သင်တို့ရဲ့လစာကို နှိုင်းယှဉ်ရခက်ခဲပါတယ်။ သင်တို့ဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲတွင် အလုပ်လုပ်နေပါသလား? သင်တို့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Job Description ဟာ တူညီမှုရှိပါရဲ့လား? သင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ထက်ပို၍ သူတို့က ပိုလုပ်ရပါသလား? အလုပ်လုပ်ကြရာတွင် သူတို့ကပိုပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိနေပါသလား? အခြားသောသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မှုမပြုလုပ်မှီတွင် ထိုမေးခွန်းများကို သင့်ကိုယ်သင် မေးကြည့်သင့်ပြီး ရိုးသားစွာ ဖြေကြားကြည့်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
မကြောက်ပါနဲ့ - လစာငွေညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရာတွင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေပါစေ။ သင်ဘာတွေကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သလဲဆိုတာကို သင်သိနေသရွေ့တော့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိထားသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်လိုချင်တဲ့လစာငွေကို အောင်မြင်စွာညှိနှိုင်းမှု မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါက အနာဂါတ်တွင် လစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နှင့် ဘောနပ်စ်များအပါအဝင် အခြားသောလိုက်လျောမှုများဖြစ်တဲ့ (တိုတောင်းတဲ့ စောင့်ကြည့်ကာလ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရာထူးနေရာ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်) ဒါမှမဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်များဖြစ်ကြတဲ့ (ဘောနပ်စ်များ၊ အားလပ်ရက်များ) အစရှိသည်တို့ကို တောင်းဆိုကြည့်ဖို့ကိုလည်း နောက်တွန့်မနေပါနဲ့။
စကားပြောဆိုရာတွင် မလောပါနဲ့ - သင့်အနေနဲ့ အလုပ် offer တစ်ခုကို ငြင်းပယ်ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း (သို့မဟုတ်) တန်ပြန်ဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို တစ်ထိုင်တည်းပြုလုပ်ရန် မလုပ်အပ်ပါဘူး။ “သင့်ရဲ့မျှော်မှန်းလစာက ဘယ်လောက်များလဲ” ဟူ၍ မေးမြန်းလာတဲ့အခါမှာ စက္ကန့်အနည်းငယ် (သို့) မိနစ်အနည်းငယ်မျှ အချိန်ယူစဉ်းစားပါ။ သင်ပြန်လည်ဖြေကြားတဲ့အခါမှာလည်း “Job description နဲ့ လုပ်ရမယ့်အလုပ်ပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး . . .” ဟူ၍ထည့်သွင်းဖြေကြားပေးပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ offer အပေါ် အပေါင်းဘက်သို့ဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် ပို၍လမ်းစပွင့်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင့်ကို တစ်ထိုင်တည်းတွင် Offer တစ်ခုပေးခြင်းခံရပါက အဆောတလျှင်လက်ခံခြင်းမပြုလုပ်ပါနဲ့ Hiring Manager ကို ဦးစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပြီးနောက် သင့်အနေနဲ့ (၂၄ နာရီထက်မပိုစေပဲ) အဆိုပါ offer ကို စဉ်းစားရန် အချိန်အချို့လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးလိုက်ပြီးနောက်တွင်မှ သင့်ဘက်ကလက်ခံကြောင်း (သို့) ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်လိုကြောင်း ပြန်လည်အကြောင်းပြန်ပေးလိုက်ပါ။ အချိန်မှီအကြောင်းပြန်ပေးဖို့ကိုတော့ သင့်ဘက်ကသေချာအောင်လုပ်ထားရပါမယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ အဆိုပါအလုပ် offer ကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကုန်ကျစားရိတ်များကို ထည့်သွင်းပြောကြားခြင်းမပြုပါနဲ့ - လက်ရှိအလုပ်ရှင် (သို့) အလုပ်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်သူနှင့် လစာငွေအကြောင်းဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရာတွင် သင့်ဘဝဇာတ်ကြောင်းများကို ထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းမပြုပါနဲ့၊ သင်လစာတိုးတောင်းရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းကို တစ်ကိုယ်ရည်ကုန်ကျစားရိတ်များကို အကြောင်းမပြပါနဲ့ - ဒါကအလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီအရာများဟာ ငွေပိုမိုလိုအပ်လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်လစာတိုးတောင်းလိုရတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်နေရင်တောင်မှ အလုပ်ရှင်အတွက်တော့ ဒါဟာဆီလျော်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအစား အမှန်တကယ်အရေးပါတဲ့အချက်များကို အာရုံစိုက်ထားပါ။ ဥပမာ - သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုများ၊ သင့်ရဲ့အစီအစဉ်များနဲ့ သင်မျှော်မှန်းထားတဲ့အရာများအကြောင်းကို ပြောဆိုလိုက်ပါ။
အမိန့်ပေးသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ - ဒါဟာ စကားစမည်ပြောဆိုမှု/ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိန်းဂဏ္ဍန်းတစ်ခုကိုပြောကြားပြီး “ဒါမှမရရင် မလုပ်နိုင်ဘူး” ဆိုတာမျိုးမပြုလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ ငွေကြေးဟာ အထိမခံတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မည်သည့်အခါတွင်မှ ကုမ္ပဏီဘက်မှ သင့်ရဲ့တန်ဖိုးအပေါ် အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်ကို မပေးလိုက်မိပါစေနဲ့။ လစာငွေညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရာတွင် ဗဟုသုတပြည့်စုံမှုရှိပြီး နားလည်မှုလည်းရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အသိပညာဟာ စွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အချက်အလက်များအားလုံးကို မှန်ကန်စွာထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့တန်ဖိုးကို အတည်ပြုပေးနိုင်ပါက ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို သင့်အနေနဲ့ လွယ်ကူစွာထိန်းကျောင်းပဲ့ကိုင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါအချက်များအပြင် သင်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ သင့်ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတာထက် ပိုနည်းတဲ့ offer တစ်ခုကိုသာ ရရှိခဲ့ခြင်း (သို့) သင်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ ပမာဏထက် အလွန်အမင်းနည်းပါးနေတဲ့ offer တစ်ခုကိုသာ ရရှိခဲ့ခြင်းတို့ ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှ သင့်အနေနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုကို ဆက်လက်၍ထားရှိနိုင်ဖို့ဟာလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ လစာငွေညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်စဉ်မှာ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခြင်းများကို ရှောင်ရှားရပါမယ်။ ဒီလစာမှ မရရင် အလုပ်မှထွက်တော့မယ် ဟူ၍ ခြိမ်းခြောက်သလို ပြုလုပ်ခြင်းများဟာ လွန်စွာမှားယွင်းပြီး professional မဆန်သလို ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့လည်း သင်လိုချင်တဲ့လစာငွေတိုးမြှင့်မှုကို ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။